Bulawayo tycoon feeds destitute Zimbos in SA: VideoMbare Times
Home Zimbabwe News Bulawayo tycoon feeds destitute Zimbos in SA: Video
Bulawayo tycoon feeds destitute Zimbos in SA: Video. Commodity broker and serial entrepreneur Kelvin Mazhandu has stepped in to assist destitute Zimbabweans who are struggling to make a living in neighbouring South Africa during the trying times of the deadly Coronavirus.
In an interview with this publication, Mazhandu said he felt moved to assist the disadvantaged Zimbabweans because they were not being catered for in the relief budget offered to South Africans. “When the Coronavirus struck South Africa, most of my fellow brothers and sisters who are making a living through menial jobs were left stranded as the government imposed stringent lockdown regulations that prohibit freedom of movement,” Mazhandu said.
This publication is in possession of video footage that shows Mazhandu, who runs also runs a successful recycling company, distributing food hampers to the underprivileged Zimbabweans in Johannesburg. Mazhandu further urged all Zimbabweans in foreign nations to unite as a community and assist the less fortunate amongst them.
Zimbabwe Christian Leaders
Next articleThe Lockdown in Zim signalled the death of a country more than the symbolic death of the first COVID-19 Victim